Hafatra Pastoraly Noely 2005
Accueil Ny Mpitandrina Hafatra Synôdaly Hafatra Pastoraly Noely 2005
Ho an’ny Mpitandrina Mpandrindra sy ny Filoha ary ny Komitin’ny tafo sy ny vahoaka Kristiana rehetra ato Hafatra Pastoraly Noely 2005 amin’ny FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY ANDAFY
Ry havana malala ao amin’ny Tompo,
Ho aminareo rehetra anie ny sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Zanaka sy Fanahy Masina ! « Eny, notiavin’Andriamanitra fatratra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa ho velona aina mandrakizay. Aoka izay ny tahotra, fa vaovao mahafaly no entiko ho anareo, dia fifaliana lehibe ho an’ny vahoaka rehetra : Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia i Kristy Tompo. » Johany 3 , 16 ; Lioka 2, 10-11 - DIEM - Hizarantsika tsikelikely ny Dikanteny Iombonana amin’ny Baiboly Malagasy (DIEM), na dia vaovao amin’ny maro aza. Mampahatsiaro antsika izany fa miteny amin’ny fotoana maro mifandimby eto amin’izao fiainana eto amin’izao tontolo izao Andriamanitra, ka amin’ny fiteny malagasy mahazatra ankehitriny no andraisantsika ny hafatra avy Aminy. Izany no antony nampiasanay ny filazan’ny DIEM ireo andin-tSoratra Masina efa fantatsika ireo, ho entinay indray miarahaba anareo Kristiana rehetra ato amin’ny FPMA tratry ny Noely 200, sy miandrandra ny taona vaovao 2006.
Niainantsika zavatra maro tato anivon’ny FPMA ity taona 2005 ity dia. Raha tsy hampahatsiaro afa-tsy ny farany natrehintsika teo aho, ny Zaikabe tany La Roche sur Yon, dia tsy diso aho angamba raha hilaza fa niavaka iny fotoana iny, satria sambany isika no nandray mivantana teo anivontsika ny Filohan’ny Fédération Protestante de France sy ny solontenan’ny Fiangonana rahavavy Loterana any Suisse miara-miasa akaiky amintsika FPMA ankehitriny. Fiangonana mivelatra sy mitodika amin’ny rehetra fa tsy mikombona ao anatiny ny FPMA. Misaotra an’Andriamanitra isika, fa ezahintsika mba hiainana tokoa, ka tsy teny foana akory ny Firehana teôlôjika natsangantsika. Tsy azo lavina fa sarotra ny lalana ary be ny zava-manahirana, nefa izay matoky sy mino ny Tompo dia tsy miasa irery. Hanampy antsika hiroso hatrany Jesoa Kristy ! Mitaky fandraisana andraikitra mivantana amintsika amin’ny alalan’ny fanefantsika ny adidy koa izany, na dia misy aza fanampiana azon’ny hafa omena antsika. Ankasitrahana feno izay efa vitantsika rehetra efa nanao, ary irariana hatrany mba tsy hihena ny herimpo efa nasehontsika. Mbola misy ny tsy nahavita, izay amporisihanay fatratra hiezaka hatrany amin’ny fiaraha-miombona.
Arahabaina fa tafatsangana soa aman-tsara ny Sampana Vehivavy ato amin’ny FPMA (SVK). Hafa noho ny Sampana misy rehetra hatrizao io Sampana io, misahana indrindra ny asa fanampiana eo amin’ny lafiny sôsialy ato amin’ny Fiangonantsika. Fitoriana ny Filazantsara amin’ny alalan’ny asa fanampiana ireo sahirana no hataony ( Diakonia). Koa amin’izao hafatra pastoraly alefako izao no angatahako anareo any amin’ny Tafo tsirairay avy, indrindra ny tompon’andraikitra isan-tokony ( Birao, Komity), mba hanohana azy ireo ka tsy hisakana ny fanatanterahany ny soritr’asany. Mila vola mivantana sy fitaovana izy ireo. Tsy fanaovana tsinontsinona ny Sampana hafa rehetra akory izany, fa tsara ho fantatsika ny momba ny Sampana Vehivavy, noho ny maha-vaovao azy. Mampahery ny sampana rehetra efa misy koa. Samy sehatr’asa hanompoantsika an’Andriamanitra avokoa ireny.
Misy Fandaharana Fihaonambe iombonana maromaro amin’ny taona 2006 ho avy izao : Komity Maharitra (Paris), Fiaraha-miasan’ny Mpitandrina (toerana mbola hotondroina aoriana), Sampana AMF (Melun), Soritrasam-piangonana (Troyes), Sampana STK (Aix-Marseille), Sampana Fifohazana (Troyes), Sampana Tily (Lyon), Sampana Zava-maneno, Sampana Sekoly Alahady, Sampana Vehivavy ( toerana mbola hotondrona ihany koa), ary indrindra ny Synôda Lehiba faha-31 (Orléans). Samy entintsika amim-bavaka ireo, ary mamporisika anareo mba hiomana sahady hanatrika ireny, araka izay azo atao. « Ny tsy mba mihaona amin’ny hafa ihany no tsy mahay mandroso ».
Mirary Noely sambatra ho anareo ary miandrandra sahady ny taona vaovao 2006 izay antenaintsika hahatsapantsika indray ny asan’Andriamanitra eo anivon’ny Fiangonantsika izahay. Fa hoy ny Tompo Jesoa Kristy : « Sambatra izay maniry mafy hanao ny marina nosoritan’Andriamanitra, fa izy no homen’Andriamanitra fahafaham-po. » Matio 5, 6 - DIEM - Manao veloma finaritra anareo amin’ny Anaran’Ilay tia antsika !
Rev. Dr Jean A. RAVALITERA, Filoha Synôdaly, Filohan’ny FPMA